နှင်းခူဖြစ်ရင် အရေပြား နီမြန်းတာနဲ့ ယားယံတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကလေး ငါးဦးအနက် တစ်ဦးနှုန်းနဲ့ အရွယ်ရောက် လူကြီး ၁၀ ဦးအနက် တစ်ဦးနှုန်းဟာ အဖြစ်များတဲ့ နှင်းခူအမျိုးအစား Atopic Eczema ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နှင်းခူဖြစ်နှုန်းက အရင်ကထက်စာရင် အခုအခါမှာ ပိုမိုသိသာလာတာကြောင့်အလေးထားရမယ့် ကျန်းမာရေး ပြဿဿဿနာတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ နှင်းခူဖြစ်မှန်း ဘယ်လို သိနိုင်သလဲ? နှင်းခူရဲ့ ပြင်းထန်မှုအ...
Psoriasisမှာ နာတာရှည်အရေပြားရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ယင်းကအရေပြားများနီရဲ၊ ယားယံ၊ ခြောက်သွေ့ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၃% ခန့်ထိ ဖြစ်ပွားနေပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် စိတ်ကျဝေဒနာ၊ ဆီးချို၊ နှလုံးနှင့် အခြားရောဂါများပါ ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ ယင်းPsoriasis ရောဂါအား အကျိုးရှိစေမည့် ဆေးသစ်တစ်မျိုးအား တွေ့ရှိခဲ့ပြီးယင်းကလက်ရှိသုံးလျက်ရှိသော ဆေးများထက် ပို၍အကျိုးသက်ရောက်မှု ကောင်းစေကြောင်း၊ လူ...
UCLA တက္ကသိုလ်နှင့် Pittsburgh တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်များက ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားပေါ်တွင် သဘာဝအတိုင်း နေထိုင်လေ့ရှိသော ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးသည် အရေပြားပေါ်တွင် ဝက်ခြံဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားများကို ဖျက်စီးနိုင်သည်ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ ယခုလေ့လာရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့သော အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အရေပြားပါရဂူ Prof: Robert Modlin က 'ဝက်ခြံရောဂါကို လူပေါင်းသန်းနဲ့ချီပြီး ခံစားနေရပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးက...
ဝဲဆိုတာ ကေလးတြေမွာ အဖြစ္မ်ားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သန့်သန့်ရွင်းရွင်း မေနတဲ့ကေလးတြေ ၊သန့်ရွင်းရေးကို မိဘေတြက ဂရုတစိုက် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း မရွိတဲ့ကေလးတြေမွာ ဖြစ္တက် ပါတယ်။ တခ်ို့ လူလတ္ပိုင်း၊ လူငယ္ပိုင်းတြေမွာလည်း ဖြစ္တက္ပါတယ်။ စာဖတ်သူတြေထဲမွာ ကိုယ္တိုင်ျဖစ္ဖူးတာမ်ိုး ရွိနိုင်သလို ပတ်ဝန်းက်င္မွာ ဝဲပေါက္တဲ့သူတြေကို တြေ့ဖူးကောင်းတြေ့ဖူးကြမွာပါ။ ဝဲရောဂါပိုးကောင်(Sarcoptes Scabiei) ------...
ဇင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြုမှုတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ စနစ် (system) ပေါင်းများစွာနဲ့ ဆက်နွယ်ပတ်သတ်မှု ရှိနေပါတယ်။ ဇင့်ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေအနေနဲ့ - ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ် ( Immune system) - အစာခြေခြင်း ( Digestion) - ဆီးချိုသွေးချိုအား ထိမ်းချုပ်ခြင်း ( Control of diabetes) - စိတ်ဖိစီးမှု အား ထိမ်းချုပ်ခြင်း ( Improves stress level) - စွမ်းအင်ဇီဝက...
Genital Herpes လိင်လမ်း ရေယုံ
Genital herpes လိင်လမ်းရေယုံဆိုတာလိင်ကတဆင့် ကူးစက်စေတဲ့ရောဂါတွေ အများကြီးထဲမှာပါတယ်။ ယောက်ျား-မိန်းမလိင်အင်္ဂါတွေ အနီးအနားအရေပြားနဲ့ (မြူးကပ်စ်) အမြှေးပါးတွေမှာ လာဖြစ်တယ်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ၂ မျိုးရှိတယ်။ 1.Herpes simplex virus type2(HSV-2) 2. Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) အမျိုးအစား (၂) က ပိုဖြစ်တယ်။ ပါးစပ်နဲ့ လိင်အင်္ဂါတွေကထွ...
အရေပြား ယားယံခြင်း အကြောင်းများ
မိတ်ဆွေ တစ်ဦး အိမ်လာလည်ရင်း ကျွန်မ အမျိုး သားအား သူ၏ လက်နှင့် ခြေထောက်၊ ပေါင်တို့မှာ ယားယံ နေတဲ့ အကွက်ငယ် (၁ စင်တီမီတာ အ ရွယ်) လေးများ ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်ကို ပြပါတယ်။ သူ့အပြောအရ ဤအကွက် လေးများပေါ် လာတာ ၁ လခန့် ရှိပြီ။ သက်သာလိုက်၊ ပြန်ယားလိုက် နှင့်စိတ်ညစ်နေကြောင်း၊ ပွေးလို့ထင်ပြီး ပွေးရောဂါအတွက်လိမ်းရတဲ့ အရေပြားယားနာလိမ်းခရင်မ်တွေလည်း လိမ်းနေကြောင်း၊ သို့သော်မသက်သာကြောင်း လည်းရှင်းပြပါတယ...
ပွေး၊ ညှင်း၊ တင်းတိတ်
ပွေး၊ညှင်း၊တင်းတိတ်၊ဝက်ခြံဖု မပေါက်ဖူးတဲ့သူမရှိပါဘူး ပေါက်ဖူးတဲ့ သူတွေပါပဲ။ စိုးရိမ်စရာ ရောဂါအနာ မဟုတ်ပေမယ့် မျက်နာပေါ်မှာ အပေါက်များတဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်လို့ အလှပျက်၊မျက်နာပြရခက်ပါတယ်။ငါးရက်အတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာလိမ်ဆေးလိမ်းကြည့်ပါ။ဆေးဖော်ဖို့ကလည်း အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ဆေးနည်းမှာ-ကြက်သွန်နီဥသေးတစ်လုံးကို အခွံနွာပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ။ ပြီးရင် ကြွေပုဂံလုံထဲ ထည့်ပြီး သံပရာသီးတစ်လုံးကို...
၁။ ခြေသည်းကို တိတိရိရိ တစ်ဖြောင့်တည်း ပုံသွင်းညှပ်ပါ။ ခြေသည်းကို အဝိုက် (အဝိုင်း) ဖြစ်အောင် မညှပ်ပါနှင့်။ အကယ်၍ သင့်မှာ သွေးလည်ပတ်မှု မကောင်းစေနိုင် တဲ့ ပြဿ နာအရင်းခံဖြစ်တဲ့ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါနဲ့ သွေးကြောဆိုင်ရာပြဿ နာများရှိပါကခြေသည်းပုံသွင်း ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ခြေသည်းညှပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ၂။ ခြေသည်းကို အရမ်းတိုအောင် မညှပ်ပါနှင့်။ ခြေသည်းကို အရမ်းတိ...
လက်တစ်ဖက်တည်းတွင်မှဲ့နှင့် အညိုစက်၁၁လုံးကျော်အထိရှိပါက အရေပြား ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မား
လက်တစ်ဖက်တည်းတွင်မှဲ့နှင့် အညိုစက်၁၁လုံးကျော်အထိရှိပါက အရေပြား ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မား သုတေသနများအရ လက်တစ်ဖက်တည်းတွင် မှဲ (သို့) အညိုစက် ၁၁ လုံးကျော်ရှိေ နသည်ဆိုပါက အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုမိုများပြားသည်ဟု သိရသည်။ ယင်းသုတေသနရလဒ်ကို British Journal of Dermatology တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဗြိတိန်တွင် အမြွှာပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ Melanoma သည်...